Museveni: Askarata aan laheyn asluubta wanaagsan, waxaan u direynaa Somalia oo ah meesha… – Hagaag.com
Museveni: Askarata aan laheyn asluubta wanaagsan, waxaan u direynaa Somalia oo ah meesha…
Posted on 9 Maarso 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Madaxweynaha dalka Uganda ayaa mar kale jeediyay hadal meel ka dhac ah oo uu u gaystay dalka Somalia, kadib markii uu u soo qaatay tusaale xun Somalia.
Isaga oo ka hadlaayay kiis ku saabsan Askari ka tirsan Ciidamada Dalka Uganda oo dharbaaxay haweenay, ayaa wuxuu sheegay askarta aanan laheyn asluubta Ciidanka inay soo qortaan codsi ah in Somalia loo soo diro.
Wuxuu sheegay qof Ugandhees ah in la dharbaaxo inay tahay dambi wayn oo qalad ah, sidaasi awgeedna askarta aanan dooneyn ku dhaqanka sharciga dalka Uganda inay soo dalban karaan Codsi Somalia loogu diro, maadaama Somalia ay tahay meel aanan sharci ka jirin ayuu yiri.
“Askari in uu dumar dharbaaxo ama ku qayliyo qof reer Uganda ah waa wax aan laga aqbali karin, waana gafweyn oo Bulshadda ceeb ku ah, Askarta aan laheyn Asluubta wanaagsan oo aan bulshadda la dhaqmi karin, waxaan u direynaa Soomaaliya oo ah meesha dhaqan xumadda siddaan oo kale ah looga baahan yahay, Haddii aad careysan tahay waxaad i weydiisan kartaa dal ku galka Soomaaliya , Maxaa yeelay halkaasi ayaa looga baahan yahay Gardarada.” Ayuu yiri Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni
Waa markii labaad oo Madaxweynaha dalka Uganda uu jeediyay hadal meel ka dhac ku ah Shacabka & Dowladda Somaliya, iyadoo la wada xusuusto hadalkii uu ku sheegay in Somalia aysan ka jirin wax dowlad ah.